यस्तो छ एक डोज कोरोना खोपको मूल्य
रुसले बनाएको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन स्पुतनिक भी अमेरिकी कम्पनी फाइजर र माडर्नाले बनाएको भ्याक्सिन भन्दा सस्तो हुने भएको छ। स्पुतिनक भी को अफिसियल ट्विटर ह्याण्डलबाट गरिएको ट्वीटमा यस्तो दाबी गरिएको हो। यो भ्याक्सिन बनाउने रसियन डाइरेक्टर इन्भेस्टमेन्ट फण्डका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै तास न्युज एजेन्सीले भ्याक्सिनको मूल्य अर्को हप्ता सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।
कम्पनीको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘फाइजरका तर्फबाट बताएको एउटा भ्याक्सिनको एक डोजको मूलय १९.५० डलर हुनेछ। माडर्नाको मूल्य २५ देखि ३७ डलर राखिएको छ। एक व्यक्तिले दुई डोज लिनुपर्छ। यो हिसावले यसको मूल्य ३९ डलरदेखि ५० देखि ७४ डरलसम्म हुन्छ। यसको अनुपातमा स्पुतनिक–भी को मूल्य निकै कम हुनेछ।’
यो भ्याक्सिनलाई ग्यामेलिया नेशनल रिसर्च सेन्टर फर एपिडेमियोलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी र रसियन डाइरेन्ट इन्भेस्मेन्ट फण्ड मिलेर विकसित गरेका हुन्। यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५ करोड ८४ लाख नाघेको छ। ती मध्ये ४ करोड ४६ लाख निको भएका छन् भने अहिलेसम्म १३ लाख ८६ हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ।
उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना संक्रमण अमेरिकामा मात्रै नभइ पूरै विश्वभर खतरनाक तरिकाले फैलिरहेको बताएका छन्। उता इटलीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा १ करोड २ भन्दा धेरै संक्रमित पुगेका छन्। अमेरिकामा हालसम्म २ लाख ६१ हजार ७९० को मृत्यु भएको छ भने ७४ लाख ३ हजार ८४७ जना निको भएका छन्। दोस्रो नम्बरमा रहेको भारतमा ९० लाख ९५ हजार ९०८ जना संक्रमित भएका छन् भने भारतमा १ लाख ३३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। भारतमा ८५ लाख २१ हजार ६१७ जना निको भएका छन्।
तेस्रो नम्बरमा रहेको ब्राजीलमा ६० लाख ५२ हजार ७८६ जना संक्रमित भएका छन् भने २ लाख ६९ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ ५४ लाख २९ हजार धेरै निको भएका छन्।
अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई आउँदो महिना (डिसेम्बर) को दोस्रो हप्तामै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिन थाल्ने तयारी गरेको छ ।
अमेरिकाको कोरोना भाइरस खोप कार्यक्रमका प्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार डिसेम्बर ११ देखि नै खोप दिने गरि तयारी थालिएको हो ।
डा. मोन्सेफ स्लाओइले अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनलाई भनेका छन्, ‘खोपले स्वीकृति पाएको २४ घण्टा भित्रै खोप सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याइने छ ।’
अमेरिकामा महामारीको तेस्रो लहरले तीव्र गति लिएका बेला उनको यस्तो भनाई आएको हो । महामारीबाट विश्वमै सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अमेरिकामा पछिल्लो हप्तामा संक्रमण, मृत्यु तथा अस्पताल भर्नादर लगातार बढ्दो क्रममा छ ।
अहिलेसम्म अमेरिकामा एक करोड २२ लाख १९ हजार भन्दा बढिमा संक्रमण पुष्टि भएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस स्रोत केन्द्रले जनाएको छ ।
दैनिक झण्डै दुई लाख मानिस संक्रमित हुने गरेका छन् पछिल्ला केही दिन यता । कोभिड–१९ बाट अहिलेसम्म दुई लाख ५६ हजार सात सय भन्दा धेरै अमेरिकीको ज्यान गएको छ ।
अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले जर्मन कम्पनी बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको खोप प्रभावकारी देखिएको छ । उनीहरुले अमेरिकामा आपतकालीन रुपमा खोपको प्रयोगका लागि स्वीकृति लिन शुक्रबार निवेदन दिएका छन् ।
दुई डोज दिइनु पर्ने सो खोपको प्रभावकारिता ९५ प्रतिशत देखिएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा फाइजरले खोपको पाँच करोड डोज उत्पादन गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसशन (एफडिए) को भ्याक्सिन एड्भाइजरी कमिटिको बैठक डिसेम्बर १० मा बस्ने छ । सो बैठकमा खोपलाई स्वीकृति दिने वा नदिने बारे छलफल हुनेछ । स्वीकृति मिलेमा त्यसको भोलिपल्टदेखि नै खोप अभियान थाल्ने गरि तयारी भएको डा. स्लाओइले सिएनएनलाई बताएका छन् ।
हरेक राज्यको जनसंख्या अनुसार खोप वितरण गर्ने योजना रहेको छ । कसले खोप लगाउन पाउने छन् भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरुमै रहने डा. स्लाओइले बताए ।
फाइजरसँगै अमेरिकी कम्पनी मोदेर्नाले विकास गरेको खोपको प्रभावकारिता पनि ९५ प्रतिशत देखिएको छ र सो खोपले पनि आउँदा हप्तामा स्वीकृति लिने तयारी गरेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा जेठी जङ्गली चरीले ७० वर्षको उमेरमा बचेरो पाइन्
मङ्गल ग्रहमा पर्सिभिअरन्स् पहिलो पटक गुड्यो
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लागि खाडल खन्नुभयो : अध्यक्ष सापकोटा
आफूहरुसँग हातहतियार नभएको विप्लव समूहको दावी
प्रवीण मृत्यु प्रकरणमा फरार दुईजना पक्राउ, उर्लाबारीका इन्स्पेक्टर जिल्ला तानिए
हत्या गरेर सुन लुट्ने खानीखोला प्रहरीद्वारा पक्राउ
विप्लवलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने प्रतिक्षामा छु : अध्यक्ष प्रचण्ड